မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: Happy Birthday! Winkabar lay (on 25th November)
စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ဟာသ။ ရယ်ရတယ်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေနော်အစ်မ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သမီးလည်းသွားစောင့်နေရင်ကောင်းမလား။ စောစောသိလည်းကောင်းသားပဲ။ :P
ဟယ်.. ကလေးကို မြှောက်ပေးနေတယ်.. :P
Oh. just read your profile... I found that you are writing in so many blogs.. that's nice..
ဒါကြောင့် မမယ်လိုဒီကြီး မန္တလေးက မန်းသီတာ ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့တစ်နေရာမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး အတွဲချောင်းနေတာကို တွေ့ဖူးသလိုလိုပဲ ဗျာ။ သူများတွေကို ပန်းခြံထဲသွားအောင် မြှောက်မပေးပါနဲ့ ဗျာ .. :P ဟီး ဟီး ဟီး ကိုတိုး